Okwu Mmalite nke Flanges Steel
Flange bụ akụkụ na -ejikọ ọnụ n'etiti ọkpọkọ na ọkpọkọ, ejiri mee njikọ n'etiti ngwụcha ọkpọkọ; a na -ejikwa ya na flange nke akụrụngwa maka njikọ dị n'etiti ngwaọrụ abụọ, dị ka flange nke na -ebelata. Flange njikọ ma ọ bụ flange nkwonkwo na -ezo aka kemwepu co ...
Mbupụ ngwá ụlọ Hebei n'ime nkeji atọ mbụ nke 2020 ruru ijeri yuan 4.59
Mkpokọta nrụpụta nke ụlọ ọrụ na -emepụta arịa ụlọ na mpaghara Hebei anọwo na -eto. N'ọnwa Ọktoba 2020, ógbè ahụ emechaala ọnụ ahịa mmepụta arịa ụlọ nke ijeri 59.6 ijeri, mmụba afọ na-abawanye nke 10.6%. Mbupụ ngwá ụlọ ka na -aga n'ihu na -eto eto, ...
Kedu ihe dị iche n'etiti Pipe Bend na ikpere.
Ihe kacha dị iche na ha bụ ikpere aka dị mkpụmkpụ karịa gbagọrọ agbagọ, R = 1D ruo 2D bụ ikpere, karịa 2D na -ehulata. Pipe Elbows na Pipe Bends bụ ngwaahịa nrụnye ọkpọkọ nke a na -ejikarị agbanwe ụzọ na -asọba na sistemụ ọkpọkọ. Oge ụfọdụ ...
HEBEI ZIFENG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru oke, anyị nwere ngwaahịa dị iche iche ma bụrụ ọkachamara na nrụpụta, mbubata & mbupụ azụmahịa nke ngwaahịa dị elu. ZiFeng na -eme ike ya mgbe niile iji bulie ngwaahịa anyị ka ọ bụrụ onye isi na -achị ụwa ...